GALANA: Mahazo “gel hydroalcoolique” maimaimpoana ireo “taxi be” maka solika - Journal Madagascar
Ho fiarovana ny fahasalaman’ny mpandeha “taxi be”. Ho zaraina “gel hydroalcoolique” maimaimpoana ireo taxi be rehetra maka solika eny amin’ny tobin-dasantsy Galana manerana an’Antananarivo. Nanomboka ny 18 ka hatramin’ny 31 mey 2020 io tolotra io. “Fandraisana andraikitra ataon’ny Galana ho fiarovana ny mpandeha, ny mpamily ary ny receveur amin’ny valan’aretina COVID19 no tanjona amin’ity fizarana gel ity”, hoy ny tomponandraikitra.
Ity hetsika ity dia hetsika faharoa nataon’ny Galana taorian’ilay fanaovana famendrahana fanafody maimaimpoana ny fiara rehetra (taxi be, camion, fiaran’olo tsotra, moto) izay nanomboka ny 4 mey lasa teo ho an’ireo manjifa solika ao aminy. Tsikaritra fa maro ireo taxi be tsy mampiasa “gel hydroalcoolique” intsony kanefa anisany hifamezivezen’ny ankamaroan’ny olona. Ho fiarovana amin’ny fifindran’ny coronavirus dia ilaina hatrany ny manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fanasana tanana matetika amin’ny savony, ny fanaovana arovava…